Isikolo sokuqala sophuhliso lwe-iOS sivulwa eNaples | IPhone iindaba
Ukuba uhlala ulandela amagama aphambili abhiyozelwa ngu-Apple minyaka le, ngakumbi ingqungquthela yabaphuhlisi eyabanjwa yinkampani ngoJuni nalapho iveza zonke iindaba zeenkqubo ezahlukeneyo zokusebenza eziza kufika ngoSeptemba, inkampani ihlala ihlawula ingqalelo ekhethekileyo kubaphuhlisi Abo bahlala betotelwa, nangona ngamanye amaxesha, izikhokelo ezingqongqo zeVenkile yeVenkile zibangela ngaphezulu kwesinye ukushiya iqonga le-iOS ngenxa yokungakwazi ukusebenza kunye noncedo oluncinci olunikezwe ngabo baphetheyo ukuphonononga usetyenziso ngaphambi kokufika kwabo App Store.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo Sikwazisa ngezicwangciso zenkampani zokwenza iziko lokuqala labaphuhlisi be-iOS e-Itali eYurophu. Kwiinyanga kamva inkampani esekwe eCupertino isandula ukuyivula kwisixeko saseNaples. Isikolo sivula iingcango zaso ukuze nabani na onomdla kuphuhliso lwezicelo ze-ecosystem ye-iOS angabhalisela esi sikolo, apho baya kufunda khona ukwenza inkqubo kwi-iOS.
Kumsitho wokuvula, uApple uthi kuyonwabisa ukukwazi ukunceda isizukulwana esilandelayo soosomashishini e-Itali nakwilizwekazi liphela ukuya bafumane izakhono eziyimfuneko ukuze baphumelele. Ikhosi yokuqala iya kuqala ngo-Okthobha kwaye iya kuvumela abafundi abangama-200 ukuba baqale ukungena kwihlabathi lenkqubo kwi-iOS.
Okwangoku Ivenkile yeeVenkile inezicelo eziphantsi nje kwezigidi ezi-2. EYurophu, ngaphezulu kwesigidi se-1,2 sabantu bazinikele kuphuhliso lwezicelo zale ecosystem evelise kufutshane ne-10.000 yezigidigidi zeedola kubaphuhlisi belizwekazi elidala. Umdla ka-Apple kubaphuhlisi usengqiqweni, kuba ngaphandle kwazo, izixhobo zenkampani bezingazukufana nomgangatho ngokwendlela yesicelo kunye nemidlalo, kuba namhlanje uninzi lwezicelo lufumaneka kuphela kwi-ecosystem iOS kwaye okwangoku akukho njongo yokufika I-Android.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Isikolo sokuqala soPhuculo se-iOS sivulwa eNaples
Fumanisa ukuba kutheni sele inye eArgentina ngaphezulu konyaka!